Blocked Tear Duct (မျက်ရည်ပြွန် ပိတ်ဆို့ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Blocked Tear Duct (မျက်ရည်ပြွန် ပိတ်ဆို့ခြင်း)
Blocked Tear Duct (မျက်ရည်ပြွန် ပိတ်ဆို့ခြင်) ကဘာလဲ။
မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းဆိုသည်မှာ မျက်လုံး၏ မျက်ရည်စွန့်ထုတ်သည့် စနစ်သည် တစိတ်တပိုင်း (သို့) အပြည့်ပိတ်ဆို့နေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ပုံမှန်အတိုင်း မျက်ရည်မစီးဆင်းနိုင်လျှင် မျက်ရည်ဝဲခြင်း၊ ယားယံခြင်း (သို့) နာတာရှည် မျက်လုံးရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပိတ်ဆို့နေသော မျက်ရည်ပြွန်သည် ပြန်လည် ပြုပြင်၍ရသည်။ ကုသမှုသည် ပိတ်ဆို့ရသည့် အကြောင်းရင်း နှင့် လူနာ၏ အသက်ပေါ်မူတည်သည်။
Blocked Tear Duct (မျက်ရည်ပြွန် ပိတ်ဆို့ခြင်) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် မွေးခါစကလေးများတွင် ပို၍ အဖြစ်များသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီး သူမျးတွင် မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် မျက်လုံးကူးစက်ရောဂါပိုး၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဒဏ်ရာ (သို့) အကြိတ် တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သော အချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
အခြားသတင်းအချက်အလက်များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
Blocked Tear Duct (မျက်ရည်ပြွန် ပိတ်ဆို့ခြင်) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်း၏ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာလဲ?
-မျက်လုံး၏ အတွင်းထောင့်တွင် နာကျင်စွာ ရောင်ရမ်းခြင်း။
မျက်ရည်ပြန်ပိတ်ဆို့သည့်အခါ မျက်လုံး နှင့် နှာခေါင်းဆက်သွယ်ထားသော နေရာတွင် ပိတ်မိနေသော ဘတ်တီးရီးယားများသည် ကူးစက်ရောဂါကို ဖြစ်စေသည်။
-မျက်လုံး၏ အတွင်းထောင့် (သို့) မျက်လုံးတဝိုက် နှင့် နှာခေါင်း -ရောင်ရမ်းခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း နှင့် နီရဲခြင်း။
-မျက်တောင်အထက်တွင် အလွှတစ်လွှာ ကပ်နေခြင်း။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတွင်း မပါဝင်သော လက္ခဏာများ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုနှင့် ပါတ်သတ်ပြီး စိုးရိမ်ကြောင့်ကြပါက ဆရာဝန်နှင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
-မျက်လုံးသည် ခဏခဏ (သို့) ဆက်တိုက် ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်နေခြင်း။
Blocked Tear Duct (မျက်ရည်ပြွန် ပိတ်ဆို့ခြင်) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းရင်းများတွင်
-မွေးရာပါ ပိတ်ဆို့ခြင်း။ မွေးခါစ ကလေးများတွင် မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် မွေးဖွားသည့်အချိန်တွင် အမြှေးပါး မပွင့်သေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
-အသက်အရွယ် နှင့် ဆိုင်သော ပြောင်းလဲချက်များ။ လူကြီးများတွင် မျက်ရည်ထွက်ရာ အပေါက်ငယ်သည် တဖြေးဖြေး ကျဉ်းလာပြီး ပိတ်သွားသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
-ကူးစက်ရောဂါ နှင့် ရောင်ရမ်းခြင်း။ နာတာရှည် ဖြစ်သော ကူးစက်ရောဂါ နှင့် ရောင်ရမ်းခြင်းတို့သည် မျက်ရည်စွန့်ထုတ်သည့် စနစ်ကို ပျက်စီးစေသဖြင့် မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
နာတာရှည် ထိပ်ကပ်နာသည် မျက်လုံးနားတဝိုက် တသျှူးများကို ထိခိုက်စေပြီး အမာရွတ်ဖြစ်စေကာ မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
-ထိခိုက်ဒဏ်ရာ။ နှာခေါင်းထိခိုက်မိခြင်း၊ ဥပမာ- နှာခေါင်းရိုးကျိုးခြင်းသည် မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သော အမာရွတ်များကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
-အကြိတ်။ မျက်ရည်ပြွန်စနစ်ကို ဖိမိနိုင်ပြီး မျက်ရည်ထွက်ခြင်းကို ဟန့်တားသည်။
-ကင်ဆာအတွက် ဓါတုဆေးသွင်း ကုသခြင်း နှင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် ကုသနည်းတို့သည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနှင့် မျက်ရည်ပြွန်ကို ပိတ်ဆို့စေနိုင်သည်။
ငါ့ဆီမှာ Blocked Tear Duct (မျက်ရည်ပြွန် ပိတ်ဆို့ခြင်) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အောက်ပါတို့သည် မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ပို၍ဖြစ်စေသည်။
-အသက် နှင့် လိင်။ အသက်ကြီးအမျိုးသမီးများသည် ပို၍အဖြစ်များသည်။
-ယခင် ခွဲစိတ်မှုများ။ ဥပမာ- မျက်စိ၊ မျက်ခွံ၊ နှာခေါင်း ခွဲစိတ်များ။
-မျက်စိတိမ်စွဲခြင်း။ မျက်စိတိမ်စွဲခြင်းအတွက် အသုံးပြုသောဆေးများသည် မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ပို၍ဖြစ်စေသည်။
-ကင်ဆာအတွက် ဓါတူဆေးသွင်းကုသခြင်း နှင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးကာ ကုသခြင်း။
Blocked Tear Duct (မျက်ရည်ပြွန် ပိတ်ဆို့ခြင်) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းကို သိရှိနိုင်စေရန် ဆရာဝန်သည် ရောဂါလက္ခဏာများကို စစ်ဆေးမေးမြန်းမည်။
အခြားဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းရင်းများကို ရှာဖွေရန် မျက်လုံးကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါမည်။
အောက်ပါ စမ်းသပ်ချက်များသည် မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ရှာဖွေစစ်ဆေးရာတွင် သုံးသည်။
-အချိန်ဘယ်လောက်အတွင်း မျက်ရည်ကျသည်ကို စမ်းသပ်ခြင်း။
-ဆားရည်ကို မျက်လုံးသို့ ပတ်ဖြန်းပြီး ဘယ်လောက်မြန်မြန် မျက်လုံးက စွန့်ထုတ်နိုင်လဲ စမ်းသပ်ခြင်း။
-မျက်လုံးအား ဓါတ်မှန်၊ ကွန်ပြူတာ ဓါတ်မှန်၊ သံလိုက်စက်ကွင်း ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း။
အထက်ပါ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်း မည်သည့်နေရာတွင် ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်နေသည်ကို သိရှိနိုင်သည်။
Blocked Tear Duct (မျက်ရည်ပြွန် ပိတ်ဆို့ခြင်) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
တခါတရံ တစ်ခုထက်ပိုသော ကုသမှုမျိုး လိုအပ်တတ်သည်။
ဆရာဝန်သည် ကူးစက်ရောဂါပိုးကို သံသယရှိလျှင် ပိုးသတ်ဆေးပါဝင်သော မျက်စဉ်းခတ်ဆေး (သို့) သောက်ဆေးများကို ဆေးညွှန်းပေးမည်။
ကလေးများတွင် မျက်ရည်ပြွန်ပွင့်သွားစေရန် ကူညီပေးခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကို ဆရာဝန်မှ ညွှန်ကြားပေးမည်။
ညင်သာသော နှိပ်နယ်ခြင်းကို နှာခေါင်းအပေါ်ပိုင်းမှ တဆင့် မျက်ရည်ပြွန်တလျှောက် ပြုလုပ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။
-အကယ်၍ မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် မျက်နာဒဏ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးလျှင် ဆရာဝန်သည် အချိန်တစ်ခုစောင့်ပြီး ဒဏ်ရာသက်သာသည်နှင့်အမျှ မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းသက်သာခြင်း မသက်သာခြင်းကို စောင့်ဆိုင်းပေမည်။
-မျက်ရည်ပြွန် အလိုလို မပွင့်နိုင်သည့် မွေးခါစကလေးများ၊ လမ်းလျှောက်စ ကလေးများ စသည်တို့နှင့် မျက်ရည်ပြွန် တစိတ်တပိုင်း ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်နေသည့် အရွယ်ရောက်ပြီး လူကြီးများတွင် မျက်ရည်ပြွန်ကို ချဲ့ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း နှင့် ရေများများဖြင့် ဆေးကြောလိုက်ခြင်းဖြင့် ကုသခြင်း။
အခြားသော ကုသနည်းများ မအောင်မြင်လျှင် (သို့) ပြန်ဖြစ်နေလျှင် ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်။
မွေးခါစကလေးများ၊ လမ်းလျှောက်စ ကလေးများ စသည်တို့နှင့် မျက်ရည်ပြွန် တစိတ်တပိုင်း ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်နေသည့် အရွယ်ရောက်ပြီး လူကြီးများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
-မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ကုသရာတွင် အသုံးပြုသော ခွဲစိတ်ခြင်းကို Dacryocystorhinostomy ဟုခေါ်သည်။ ထိုခွဲစိတ်မှုသည် မျက်ရည်ကို နှာခေါင်းတွင်းသို့ စီးဆင်းသည့် လမ်းကြောင်းကို ပြန်ပွင့်စေသည်။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်း နှင့် အိမ်သုံးဆေးမြီးတိုများသည် မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းကို သက်သာစေနိုင်သည်။
-မကြာခဏ လက်ကို စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောခြင်း။
-မျက်လုံးကို မပွတ်မိအောင် ကြိုးစားခြင်း။
-ဆေးလိပ်ငွေ့သည် ကလေးငယ်များကို ထိခိုက်စေပြီး မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ပိုဆိုးစေသဖြင့် ကလေးများနား ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ခြင်း။
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/blocked-tear-duct/home/ovc-20183590 Accessed December 31, 2016
Blocked tear duct. https://www.aao.org/eye-health/diseases/what- is-blocked- tear-
duct Accessed December 31, 2016
At-Home Treatments for Blocked Tear Ducts in Babies.
http://www.healthline.com/health/parenting/baby-blocked- tear-duct#2 Accessed